Gadashada Chromecast waa go'aan sahlan in la sameeyo. Wixii $ 35, waxaad ka heli kartaa dongle ah wireless in plugins galay dekedda HDMI firaaqada on your TV, oo kuu ogolaanaya in aad si fudud "ee kabka" video iyo maqal ah, waxa uu. Si kastaba ha ahaatee, waxaad had iyo jeer dhibaatooyin ka adkaado marka aad si TV tuuray warbaahinta aad. Dhawr maalmood ka hor, waxaan abuuray a poll on Google Plus si ay u ururiyaan qaar ka mid ah arrimaha Chromecast caadi ah (fiiri hoos). Maanta waxaan la wadaagi doonaa qaar ka mid ah xalka macquulka ah inuu kaa caawiyo inaad waxyaalaha saxdo. Si aad u ogaatid talooyin dheeraad ah oo ku hoorto warbaahinta in TV, hubi hagahan >>
1. nooc oo ka mid ah video aan la huleeshay karo
Waxaynu wada ognahay in Chromecast ayaa xaddidaadda qaabab talooyin ah. Waxa kaliya ee la jaan qaada MP4 iyo WebM encoded la codecs Video H.264 Profile High Level 4.1, 4.2 iyo 5, VP8 iyo codecs audio HE-AAC, LC-AAC, CELT / Opus, MP3 iyo Vorbis. Sidaas darteed haddii aad video files aan la huleeshay kara, in ay si fudud sababtoo ah waxay tahay ma ay taageerayaan Chromecast.
Si loo xaliyo dhibaatada, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Video Converter oo cusub ku qalabaysan shaqada Server Media inay u ogolaato in aad si toos ah tuuray qaab video kasta oo ay u Chromecast. noqda qodobkan xal ka badan .
2. Cinwaan ma muujiyaan aan
Dhab ahaantii, oo dhan barnaamijyadooda caadiga ah sida Netflix, YouTube, Google Play Movies, Hulu, HBO Tag, oo qaar kale oo badan waxay fursad u Cinwaan, si Chromecast awood u ridaya subtitles u rogtid oo aad TV. Si kastaba ha ahaatee, sida faylasha degaanka sida MKV, Chromecast ma laha hawsha. Laakiin qaar ka mid ah codsiyada, sida Wondershare Video Converter , VideoStream iyo AllCast , kaa caawin karaan waxaa ka samaysan.
3. naqdida iyo Hadhi marka la isticmaalayo tab loo shubay
Haddii aad isticmaasho barnaamijyadooda sida YouTube ku saabsan telefoonka, habka cabaya la Chromecast waa wanaagsan. Laakiin haddii aad hoorto via tab ah ee Chrome, gaabiyo wuxuu noqon karaa mid aad u daran ah.
Haddii labada aad router wireless oo uu xawaaraha broadband si fiican u yihiin, ka dibna mid ka mid ah habka deg deg ah in ay taasi u xaliyo waa in la beddelo oo tayo leh loo maqli ah. Si tan loo sameeyo, guji icon Chromecast ee app bar Chrome iyo soo qaado Options.
Sida aad arki karto, waxaa jiri doonaa saddex doorasho oo tayo leh qiyaas. Waad u baddelen kartaa 480p ugu hooseeya oo dib u daawanaya video aad. Inkasta oo tayo video ay hoos u dhigi doontaa, waxa aad helaysaa video-aragnimo macaan.
4. signal WiFi waa daciif
Xiriiriyaan waa mid ka mid ah arrimaha ugu weyn ee hoorto in aad Chromecast. Haddii aad xiriir ma yahay in ay, ama Chromecast uu leeyahay xidhiidhka dhibaatooyin la wireless aad helaan dhibic, markaas loo maqli karo waxa ay noqon doontaa daran.
Haddii xaqiiqda, Chromecast waxaa geeyey la cable yar HDMI extender, taas oo waxtar leh ma ahan oo kaliya markii ay isku xira qalabka si godka HDMI ah ee adag tahay in la gaaro meel, laakiin sidoo kale waxtar leh ay u guuraan Chromecast iska laaya si xoogan gaashaan aad TV, kuwaas oo wanaajin doona aad isku xirnaanta WiFi.
5. Ma la macaamiisha VPN Android shaqeeyaan
Dhibaatada waxaa loo isticmaali karaa iyadoo la isticmaalayo VPN in a router DD-WRT. Markaasuu ul soo Chromecast noqon karaa isla LAN sida loo shubay qalabka, oo labadaba ka dambeeya isku VPN.
> Resource > Video > Dhibaatooyinka Talooyinka Common Chromecast Arrimaha ah